Tag: ịzụta mkpebi
E nwere otu ìgwè ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m na-adịbeghị anya enwetatụbeghị ọnụ iji chọpụta ihe na-ezighị ezi na gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ. Maka ọtụtụ akụkụ, ọ bụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na-agbasi mgba ike ma na-ana obere ụgwọ. Agencieslọ ọrụ na-ere ọfụma na-akwụ ụgwọ karịa ma na-agba mbọ obere. Nke ahụ bụ echiche nzuzu, amaara m, mana hụ ya ugboro ugboro. Ihe omuma a sitere na Salesforce Canada metutara akparamaagwa nke ahia na ahia
N'abalị a ka m nwetara email site na Panera Bread. Dị ka ọtụtụ mmemme email n'oge a, ngwa email m na-egbochi ihe oyiyi. N'ihi ya, lee ihe email ahụ dị ka: Ọ bụghị ihe siri ike… ọkachasị maka ozi email mara mma nke dị ka nke a: enweghị m ike iche mmadụ ole kpochapụrụ email na-agụghị ya n'ihi na… ọ nweghị ihe ị ga-agụ ma ọ bụrụ na ịnweghị 'budata ihe oyiyi. Nke a bụ ezigbo nsogbu na HTML ozi ịntanetị… mana
Sọnde, Septemba 27, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Mgbe m na-akwadobe ikwu okwu na Cincinnati n'izu a, Achọrọ m ịnye ọhụụ mara mma nke kwuru banyere otu ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta gbanwere usoro ahịa. Nke a bụ ihe m na-akpọ Ọdụ ahịa Ọhụrụ: Ọ na-abụbu na ndị na-ere ahịa na-achịkwa akara na izi ozi na ntanetị, na-achọ ka ndị ahịa na azụmaahịa lelee ngosipụta, lelee ozi broshuọ ma mesịa gwa onye na-ere ahịa okwu. N'oge ahụ, ha azụtaghị ihe ọ bụla